"ငါ့ရဲ့ reboot ကဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ " - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
"ငါသည် Porn သွေးဆောင် ED ရှိသည်။ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါ၏အ reboot ယူကြမည်နည်း "ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်အီးမေးလ်များနှင့်ဘလော့ဂ်မှတ်ချက်များအတွက်ရအသုံးအများဆုံးမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျမြျှောလငျ့သောအရာကိုသိလို: အဘယ်ကြောင့်ထိုနောက်မှငါသည်နားလည်ပါတယ်။
porn-သွေးဆောင် ED ၏ပျော့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူအချို့သောယောက်ျားတွေအဘယ်သူမျှမ PMO (အဘယ်သူမျှမ porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်) ၏ 3-6 ရက်သတ္တပတ်အတွင်း reboot နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, အခြားသူများအားပြုလုပ်ရန်4လအထိကြာနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါအချို့အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်ပါကအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူဖို့တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအထိကြာလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသင်၏အ reboot ယူကြမည်နည်း ဒါကြောင့်အတိအကျဘာလဲဆိုတော့အချိန်ပေးရမယ့်ရှုပ်ထွေးပြီးမေးခွန်းတစ်ခုကိုနှင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးနေစဉ်, အဘယ်အရာကိုကြှနျုပျတို့ပွုနိုငျ reboot ယူပါလိမ့်မယ်အချိန်ရဲ့အရှည်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအချက်များကိုကြည့်နေသည်။
1 ။ ကြှနျတေျာ့ကိုယျပိုငျအတှေ့အကွုံ။
2 ။ အများအပြား Reading, များစွာသော (များလွန်းရေတွက်ရန်) reboot ငါကိုလက်ခံရရှိပါတယ်အီးမေးလ်များ၌၎င်း, ငါကောက်ယူပါတယ်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများအတွက်အမျိုးမျိုးသောအင်တာနက်ဖိုရမ်များအပေါ်အကောင့်။
ဤအရင်းမြစ်များမှကျွန်မအရေးကြီးသောအချက်များ 8 ကဆင်းပြုတ်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသင်၏အ reboot ယူပါလိမ့်မယ်အပေါ်မူတည်:
1 ။ သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်နှင့်အတိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကို။ ယေဘုယျအားဖြင့် porn ပြင်ပအများကြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမရှိဘဲအသက်အရွယ်နုပျိုသောယောက်ျားတွေအဟောင်းတွေယောက်ျားတွေထက် recover လုပ်ဖို့ကြာကြာယူလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေစစ်မှန်သောလက်တွဲဖော်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရှိမတိုင်မီအငယ်ယောက်ျားတွေအများအားဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်း, ရုပ်ပုံများ (ဆိုတစ် Playboy မဂ္ဂဇင်း) သို့မဟုတ်ပျော့-Core porn နှင့်အတူ masturbate ဖို့သင်ယူနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းန်းကျင်မရောက်မှီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်သူအသက်ကြီးသူတို့တစ်တွေပိုမြန် reboot တိုငျတှေ့နိုငျသညျ။ အစစ်အမှန်လိင်နှင့်အတူဦးနှောက်၌ဤအတိတ် encoding ကရှိခဲ့ပွီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ပုံရသည်။
2 ။ ဘယ်လိုနှစ်ပေါင်းများစွာသင် PMO သို့ခဲ့ကြသည်။ သငျသညျ 10 နှစ်ပေါင်းအကြီးအကျယ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးခဲ့ကြပါလျှင် ပို. ခက်ခဲဖြစ်နဲ့သင်ရုံပြီးခဲ့သည့်နှစ်က porn ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလျှင်ထက်အချိန်ပိုမိုကြာမြင့်မည် (ပဲပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့သူ, တကယ်ပေမယ်?)
3 ။ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသင်၏အတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအစည်းအဝေးများခဲ့ကြသည်နှင့်မည်သို့မကြာခဏ။ 30 မိနစ်အစည်းအဝေးများ vs. ငါးနာရီအစည်းအဝေးများ။ တစ်ကြိမ်နှစ်ရက် vs. တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်။ ကြာကြာနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏအစည်းအဝေးများတစ်ဦးမဟုတ်တော့ reboot အချိန်တူညီ။
4 ။ ဘယ်လိုအစွန်းရောက်သင့်ရဲ့အရသာမှဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ သင်ပိုမိုလွန်ကဲအမျိုးအစားများမှဆိုးရွားလာခဲ့သည်လျှင်, သင် reboot မှကြာပါလိမ့်မယ်။ ပိုများသောအစွန်းရောက် = အချိန်ပိုမို။ သင့်ဦးနှောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွနှင့် "ပုံမှန်" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ rewire ဖို့အချိန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါတိုင်းနောက်တဖန် "ပုံမှန်" လိင်မှပယ်ရနိုင်ပါလိမ့်မည်: ထိုအခါမေးခွန်းကိုဖြေဖို့? အတော်များများကယောက်ျားတွေရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြပါပြီ - ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာမှအဘို့ပြင်ဆင်ရလိမ့်မည်။
5 ။ ဘယ်လိုပြင်းထန်သင့်ရဲ့ပညာရေးပါပဲ။ ပညာရေး၏ပြင်းထန်မှုအမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမှန်မှန်ရနိုင်သူကို (porn မပါဘဲ) 70% စိုက်ထူဖွယ်ရှိအားလုံးမှာစိုက်ထူမရနိုငျ (အတူတူပင်အခြေအနေမှာ) သူတစ်ဦးယောက်ျားတစ်ယောက်ထက်ပိုမြန် recover ပါလိမ့်မယ်။ ယခုသင်ဘယ်မှာအကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူရိုးသားဖြစ်ခြင်းကိုသင်ရှေ့ဆက်လမ်းအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကူညီပေးပါမည်။
6 ။ porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, အော်ဂဇင်: ဖြစ်စေမသည်သင်တို့အပေါင်းသုံးမှရှောင်ကြဉ်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်အများအပြားယောက်ျားတွေ '' အစီရင်ခံစာများကနေပြန်လည်နာလန်ထူမြန်ကကြားနေနှင့်အတူညစ်ညမ်း, ဒါပေမယ့်အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်မရမယ့်အနေဖြင့်ဖြစ်ပျက်ပုံရသည်။ တချို့ကဒီကြောင့် desensitized ဦးနှောက် / လိင်တံ၏ "Re-sensitive" ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, အချက်ကိုမ PMO ကအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဖြစ်နေဆဲသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
7 ။ ဘယ်လိုတသမတ်တည်းသင်သည်သင်၏ reboot ၌ရှိကြ၏။ 20 ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ် 50 ရက်အကြာမှာ Relapsing - ငါစတင်ခဲ့သောအခါငါလုပ်ခဲ့တယ်နဲ့တူ - နောက်ကျောကိုသင်သတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကဖြစ်ပျက်ပါကအကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်တက်ရိုက်နှက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့်နောက်ကျောကိုသင်သတ်မှတ်ပါကနောက်တဖန်ဖြစ်ပျက်ပါဘူးသေချာစေရန်အစီအစဉ်တစ်ခုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။ ဒါ့အပြင်သတိပေးခဲ့သည်ခံရ - လူအတော်များများကို restart အစီရင်ခံစာများအရသိရသည်သင်ပြန်မသတ်မှတ်စေခြင်းငှါအဆင်သင့်ပါပဲရှေ့၌သင်တို့စိုက်ထူစမ်းသပ်။
8 ။ အခွားသောလျော့နည်းမြင်သာထင်အချက်များ။ သင့်ရဲ့ reboot ယူပါလိမ့်မယ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်ဟုလျော့နည်းကွန်ကရစ်ဖြစ်ကြောင်းတခြားအရာတွေလည်းရှိတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကို restart နှင့်သင့်အတွေးပုံစံများကိုဦးတည်သင့်ရဲ့သဘောထားကို။
ပိုပြီးစိတ်ပူတဲ့သူယောက်ျားတွေကြာသွားနေကြသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်တူသောအရာတို့ကိုအကြောင်းအများကြီးစိုးရိမ်ပူပန်ရှာတွေ့ပါနဲ့ "အစဉ်အမြဲငါနောက်တဖန်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ပါလိမ့်မည် 'ဒီစဉ်ဆက်မပြတ်စိုးရိမ်လိင်အကြောင်းကိုသင်ပိုမိုစိုးရိမ်စေခြင်းနှင့်ပင်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်" ဒီသာမန်ဖြစ်သနည်း "-? porn နှင့်အတူတစ်ဘုံတွဲဖက်မှု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု -induced ။ ဒီစိုးရိမ်စရာ၏တဦးတည်းကြီးက lengthier reboot လုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ဘယ်လိုမရသိပ်စိတ်မပူပါနဲ့သလော တဦးတည်း, သင်လုပ်ငန်းစဉ်အလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်သောယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ဖို့ရှိသည်။ အတော်များများကယောက်ျားတွေသင်တို့ရှေ့မှသွားပြီနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ကျော်လွှားပါပြီ။ သင့်ရဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူလွန်းဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကိုးစားပါ။ ဤအရာများကိုစဉ်းစားဘို့အကိုယ့်ကိုကိုယ်တက်ရိုက်နှက်မနေပါနဲ့, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသင့်တိုးတက်မှု၌သငျကျောမသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ် - သငျဘုံတွဲဖက်မှုဖြစ်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံနေတာအထူးသဖြင့်ပါ။ စိုးရိမ်ပူပန်အပေါ်ခုတ်လှဲ (နှင့်အပန်းဖြေနှင့်သင့်စိတ်ကိုရှင်းလင်း) ကို, ငါတရားအားထုတ်သို့မဟုတ်တိုးတက်သောအပန်းဖြေ၏နေ့စဉ်စားသောက်သောအစားအစာအကြံပြုပါသည်။
ငါကိုယ်တိုင် reboot timeline ကိုရေးခဲ့တယ်။ မင်းဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် -